Nezvedu | Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd.
HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD yakavambwa muna 2008. Isu takaita basa rekugadzira nekutengesa zvigadzirwa zvekurapa zvinoraswa kwemakore gumi nemaviri, isu tine yakazvimirira yekutsvaga nekuvandudza dhizaini, muyero wekugadzira uye wekutengesa timu, Iyo kambani inonyanya kuve kuburitsa Iv catheter, Urine bhegi, combi chimiso, Nhatu-nzira stopcock, Heparin cap, Nzira dzekuvhiya, Ropa lancet, Cord kiramba, yekuvhiya suture tsono neshinda, Tsono yemahara yekubatanidza, yekukweva chubhu, dumbu chubhu, yekudyisa chubhu, nelaton chubhu nekudaro on, Sezvo mugadziri uye ekisipota, tine chivimbo chehunhu hwedu uye mutengo uye tinoda kukupa iwe neakanakisa sevhisi.
Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera mberi nekuvandudza uye hunyanzvi, HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD yave China inotungamira uye inozivikanwa pasi rese inogadzira zvigadzirwa zvekurapa zvigadzirwa zvedu kune ese pasirese kuTurkey, Pakistan, Spain, Poland, South Africa, Kenya, Argentina, Colombia, Malaysia, Germany, Nigeria, Romania. Kambani yedu ine CE0123 uye ISO13485 Yakaburitswa nemubatsiri weTUV.
Mumakumi mashoma emakore apfuura, HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD inoshingairira kupindura kumusika kudiwa kwehungwaru kugadzirwa. Kubatanidzwa kweindasitiri zviwanikwa, zvakasanganiswa neruzivo tekinoroji, kuvaka dzakangwara musangano musangano maneja mhinduro. Mukuziva kugadzirwa kwehungwaru panguva imwe chete, zvakare kukuunzira iko nyore kweyechokwadi-nguva yekugadzira dhata yekutevera kugona, chaiyo-nguva shanduko, chaiyo-nguva yekutarisa, zvishoma nezvishoma kudzora kupindira kwevanhu panguva imwe chete, kugadzirisa chigadzirwa chigadzirwa uye nguva yekuendesa, uye kuunza zvimwe zvirinani kune manejimendi.
Yedu kambani chinangwa chehunhu kutanga, mutengi kutanga, sevhisi kutanga, Iyo yakanakisa mutengo wekuita mutengesi ndicho chinangwa chedu. Ngatiitei zvimwe kuedza kwehutano hwevanhu.
Hunhu hunovimbiswa kubva pane zvakasvibirira kusvika kune chakapedzwa chigadzirwa
1. Edza zvese zvinyorwa zveodha uye chengeta rekodhi yekutarisa.
2. Zvikamu zvese zvinoiswa mudura zvakanaka, muchengeti wemasheya anotora manotsi ezvese zvekunze uye instock. Ndokumbira utarise kune yakanamatira pikicha.
3.Tora zvinyorwa zvese zvinoitwa uye zita remushandi, unogona kuwana munhu ane basa nhanho.
4. Kuongororwa kwechiremba usati waburitsa kwese zvigadzirwa. Chirevo, pikicha uye vhidhiyo zvichapihwa kumutengi.
6. Nyanzvi uye yakadzidza timu yehunyanzvi.
Doro Kugadzirira Pad, Kubvisa Catheter, Mucheche Kudyisa Tube, Iv Catheter, Doro Pad, Kuvhiya Nereza Sizes,